ukujongana: iapile ipad mini 4 i-wi-fi 128gb yi-25% isaphulelo xa kuthengiwe
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idilesi: I-Apple iPad Mini 4 i-Wi-Fi 128GB ngama-25% isaphulelo kwi-Best Buy
Idilesi: I-Apple iPad Mini 4 i-Wi-Fi 128GB ngama-25% isaphulelo kwi-Best Buy
I-iPad Mini 4 eneminyaka emibini ubudala iyathengiswa kwakhona, ke ukuba awuzange uthenge isilayidi esinexabiso eliphantsi se-Android okanye ithebhulethi ebiza kakhulu yeApple, unokuyijonga le nto.
Ukuthenga okungcono ngoku kunika kuphela i-Wi-Fi inguqulelo ye-iPad Mini 4 128GB nge- $ 299.99 nje, ke wena & amp; uya kugcina i-100 leedola xa uyithenga. Isilayidi siza ngokwahluka kwemibala emithathu: iGrey Space, iSilivere neGolide.
Kunye nethebhulethi, abathengi abayithengayo baya kufumana ubhaliso lweenyanga ezi-6 kwiTrend Micro Internet Security, isoftware eyenzelwe ukukhusela ukuya kuthi ga kwizixhobo ezintathu (i-PC, iMac, i-Android iOS kunye neetafile zeWindows kunye nee-smartphones).
Le yimveliso entsha kraca, kodwa ukuba awuyivumeli ibhokisi evulekileyo, ungayifumana IPad Mini 4 I-Wi-Fi 128GB ngexabiso eliphantsi kwi- $ 284.99. Isenokungafaneleki ukuba ube nengxaki, kodwa ukhetho lukhona ukuba ufuna ukulisebenzisa. Ngokucacileyo, ukuhanjiswa simahla kufakiwe ngokunjalo, kunye nazo zonke izixhobo zentsusa kunye newaranti.
I-smartphone enobomi bebhetri obungcono 2015
yakhululwa nini i-lg g3
Uza kuWenza nini amaBali oMsebenzisi?
Ungabelana njani neefoto zakho zeendawo kunye neemephu zikaGoogle
Igama elothusayo licebisa ukuba uGoogle & apos; s elandelayo-gen Pixel Buds inokucutha iApple kunye neeapos zean AirPods 3
Sebenzisa i-REST-eqinisekisiwe kuvavanyo lwe-OAuth 2.0 yeMizekelo yokuhamba
Ezona meko zilungileyo zokukhaba ze-iPhone X